Ngaba amajelo eendaba ezentlalo abulala uphawu lwakho? | Martech Zone
Ngaba amajelo eendaba ezentlalo abulala uphawu lwakho?
NgoLwesine, uJuni 14, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 8, 2013 Douglas Karr
Ndiyinto encinci ecingweni malunga nale infographic ivela Udumo lokuThengisa. Ku bulala uphawu, ngenene kuya kufuneka wenze umonakalo kwaye andiqinisekanga ukuba le infographic iyayichaza loo nto. Nangona kuthatha umbono ongenathemba kumajelo asekuhlaleni, ukubulala yinto encinci yokuzibaxa. Indlela onokuba nayo kwimidiya yoluntu ukwenzakalisa uphawu lwakho inokuba sisihloko esifanelekileyo.
Intengiso yemidiya yoluntu sisihloko esixoxwa kakhulu. Ngaba kufanelekile ukuba uchithe ixesha lakho? Ngaba iyanceda okanye yenzakalise impembelelo yakho? Ngubani ke lo ujolise kuye: abathengi abatsha, abathengi abakhoyo, amaqabane oshishino anokubakho, okanye omnye umntu ngokupheleleyo? Phendula yonke le mibuzo ngobungqina obubandayo, nobunzima.
Kananjalo, uhlalutyo olunikiweyo sisiqwenga kwaye aluthatheli ngqalelo amalungiselelo kunye nezixhobo ezenziwe ziinkampani kwisicwangciso sabo seendaba zentlalo. Ndiyathemba ukuba iinkampani zisifundile isifundo kwaye azange zivele zangena kumajelo eendaba ezentlalo ngaphandle kokwenza isicwangciso esifanelekileyo sangaphakathi (kunye nesicwangciso sokunxibelelana kunye nokubeka ulindelo kubasebenzi). Ayisiyonyani kakhulu into yokuba siza kubona iimveliso zibulawa… kodwa siyabona uninzi lweempawu ezifumana ukonakala ngokungeyomfuneko kuba bengazilungiselelanga!
tags: uhloboImidiya yokuncokola
Imiyalelo eli-10 yePinterest yeShishini
Uvavanyo lwe-Facebook lweNtengiso, ukuZenzekelayo kunye neNgxelo